अमेरिका भासिएका नेपाली अभिनेत्रीहरु ! - Kantipath.com
काठमाडौं । नेपाली फिल्म जगतका धेरै अभिनेत्रीहरु अमेरिकामा रहेका छन् । कुनै समय ठुलै चर्चा कमाएका नेपाली अभिनेत्रीहरु एकाएक अमेरिका भासिएका थिए ।
नेपाली फिल्मबाट सोचेजस्तो प्रगति गर्न नसकेपछि भविष्य सुनिश्चित गर्न पनि उनीहरु अमेरिका भासिएको बेलाबेलामा मिडिया रिपोर्टहरु आउने गर्छन् । उनीहरु अमेरिकाका विभिन्न राज्यमा बस्दै आइरहेका छन् ।
लामो समय अमेरिका बसेर फर्कने नेपाली कलाकार हुन् गौरी मल्ल र करिश्मा मानन्धर । करिश्मा मानन्धर राजनीतिमा लागेकी छिन् । उनी नयाँ शक्ति पार्टीकी नेतृ हुन् । त्यस्तै गौरी मल्लले भने अभिनय यात्रालाई पुन निरन्तरता दिएकी छिन् ।
Previous Previous post: देउवाले आज मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्ने, को को छन् मन्त्री बन्नेको सुचिमा !
Next Next post: कति पर्ने कारहरु चढ्छन् विश्वकै धनी बिल गेट्स !